कसैलाई कसरी भनौ कि उसले तपाईलाई मन पराउछ | स्टाइलिश पुरुषहरू
तपाईलाई मन पर्ने कसैलाई कसरी भनौं
एलिसिया टोमेरो | 31/12/2021 22:00 | जोडी र सेक्स
कसैलाई तपाईलाई 'मनपर्छ' भन्नु भनेको त्यस्तो रूप वा अभिव्यक्ति हुन सक्छ। तर केही को लागी यो केहि थप जटिल हुन सक्छ किनकी उनीहरुलाई आफ्नो भावना कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने थाहा छैन सहि। यो गाह्रो हुन सक्छ किनभने त्यहाँ मानिसहरू छन् जो इमानदार हुन जान्दैनन् र त्यो असहज हुन सक्छ।
र यो केवल कसैलाई कसरी बताउन कि तिनीहरूले तपाईंलाई मन पराउँछन्, तर होइन तिनीहरूलाई कसरी बताउन समय। यो मित्रता सम्बन्ध मा जटिल हुन सक्छ, जब फारमहरू जो बचत गरिँदै थिए अब रोचक र तपाईं एक कदम अगाडि जान चाहनुहुन्छ। आफ्नो प्रेम स्वीकार गर्ने सबैभन्दा राम्रो समय कहिले हो?
1 कसैलाई उसले तपाईलाई मन पराउँछ भनेर कसरी भनाउने?
2 तिनीहरूलाई बताउन सरल चरणहरू
3 तपाईलाई मन परेको कसैलाई म्यासेज मार्फत कसरी भन्न सकिन्छ
4 तपाईलाई मनपर्ने व्यक्तिलाई स्वीकार गरेपछि कसरी प्रतिक्रिया गर्ने
कसैलाई उसले तपाईलाई मन पराउँछ भनेर कसरी भनाउने?
आफूलाई मन पर्ने कसैलाई भन्नु सबैभन्दा राम्रो तरिका हो इमानदारी प्रयोग गर्दै र यसका लागि यो आमने सामने गर्दै। निस्सन्देह यो भन्न को लागी यो सबैभन्दा प्रामाणिक र रोमान्टिक तरीका हो लिखित रुपमा गर्दैनन्। हामी सामाजिक सञ्जाल धेरै प्रयोग गर्छौं र त्यो फेसन र सबै कुरा भन्न सक्षम हुने उपकरण बन्न सक्छ। आफूले मन पराउने कसैलाई भन्नु पनि सत्य नहुन सक्छ।
जस्तो नलागे पनि शब्दहरू हावाले उडाएको हुनाले के लेखिएको हो त्यो भावना वा भावना बिना नै भन्नु हो। हामीले संकेत गरे जस्तै उत्तम तरिका हो शारीरिक र इमानदार क्षण। सामान्य नभएको कुरा हो, पक्कै पनि जब तपाइँ त्यस्तो केहि औपचारिक गर्नुहुन्छ, तपाइँ यसलाई हृदयबाट भन्नुहुन्छ।
ईमानदारीपूर्वक केहि धेरै सुन्दर ठूलो सन्तुष्टि सिर्जना हुन्छ अर्को व्यक्तिमा, त्यहाँ कुनै प्रतिक्रिया नहुन सक्छ किनभने तिनीहरू सन्देशको साथ पक्षाघात भएका छन्, तर म तपाईंलाई आश्वासन दिन्छु कि यो यति नाटकीय हुनेछैन।
तिनीहरूलाई बताउन सरल चरणहरू
तपाईं पर्छ आफ्नो दिमागमा केहि सुन्दर सिर्जना गर्नुहोस् र यसलाई सम्झनुहोस्। सन्देश ती सरल शब्दहरूबाट मात्र जानेछैन, तर अझ सुन्दर कुराले सजाइनेछ जुन मेलमिलाप हुनुपर्छ।
यसलाई एक अविस्मरणीय र समझदार क्षण जस्तो लाग्नको लागि, तपाईंले गर्नुपर्छ त्यो व्यक्तिलाई आँखामा हेर्नुहोस् र एक आराम आसन कायम, यहाँ हामी पहिले नै प्रयोग गर्न थाल्छौं गैर-मौखिक सन्देश। कुनै पनि समयमा तपाईं आफ्नो अनुहार फेर्न वा आफ्नो हात पार गर्नुहुन्न, यो साँचो लाग्दैन। यदि तपाइँसँग त्यो व्यक्तिसँग पर्याप्त विश्वास छ भने, तपाइँ तिनीहरूलाई धेरै नजिकबाट बताउन सक्नुहुन्छ, सानो इशारामा पनि। आफ्नो शरीरको कुनै पनि भाग छुनुहोस्।
अन्य प्रकारका वाक्यांश वा शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस् सामग्री बदल्नुहोस्, सन्देश अन्य व्यक्तिलाई हास्यास्पद लाग्न सक्छ। सधैं भावना र शक्तिको खोजी गर्नुपर्छ एक अद्वितीय तरिकामा प्रसारित हुनेछ।
शब्दको ठूलो लडाई पनि प्रयोग नगर्नुहोस् वा प्रश्न किटमा पुग्नको लागि उत्कृष्ट संवाद। सही शब्दहरू प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ, संक्षिप्त रूपमा र सधैं सीधा बिन्दुमा जानुहोस्। यदि तपाईंले भन्न चाहनुभएको सबै कुरा सुशोभित गर्नुभयो भने, तपाईंले बाटोमा व्यक्त गर्न चाहनुभएको कुराको विश्वसनीयता गुमाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईलाई मन परेको कसैलाई म्यासेज मार्फत कसरी भन्न सकिन्छ
तपाईले सधैं आफ्नो जीवन शैली र तपाई कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ जब तपाई व्यक्तिगत रूपमा वा सन्देशद्वारा एकताबद्ध हुनुहुन्छ। सरल र दैनिक परिस्थितिलाई ओभरलोड नगर्ने यो सधैं उत्तम तरिका हो, मानिसहरूले चुनौती वा जटिलताहरूलाई प्राथमिकता दिँदैनन्।
तपाईंले मनपर्ने कसैलाई "म तिमीलाई माया गर्छु" वा "म तिमीलाई माया गर्छु" भनेर भन्न थाल्नु पर्दैन तपाईं पक्षाघात स्थिति सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र नकारात्मक जवाफ। गर्नुपर्छ राम्रा शब्दहरू, इमोजीहरूसँग प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाईले सोच्नुभएको सबै कुरा उसलाई मन पर्न सक्छ, र अन्तमा, "म तिमीलाई धेरै मन पराउँछु" भन्ने शब्द प्रस्तुत गर्नुहोस्, जब तपाइँ संवाद बन्द गर्नु पर्छ।
तपाईलाई मनपर्ने व्यक्तिलाई स्वीकार गरेपछि कसरी प्रतिक्रिया गर्ने
यो जानकारीको एक महत्त्वपूर्ण टुक्रा हो, किनकि यो अन्य व्यक्ति हो जुन प्रतिक्रिया कसरी गर्ने थाहा छैन जस्तो लाग्न सक्छ। तर यस मामला मा यो छ व्यक्तिले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुपर्छ जसले सन्देश निकाल्छ, किनभने तपाईंले उचित प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुभएको छैन।
निराश नहुनुहोस् यदि अर्को व्यक्तिले तपाईंलाई नकारात्मक जवाफ दिएको छ वा तपाईंको समान भावनाहरू साझा गर्दैन भने। यो कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले भनेको कुरा क्रूर थिएन, तर केहि अद्भुत थियो। साथै, अर्को व्यक्ति तपाईंले कृतज्ञ महसुस गर्नुपर्छ कि कसैले आफ्नो भावना साझा गर्न चाहन्छ।
तपाईंको उत्तम जवाफहरू तिनीहरू "मेरो कुरा सुन्नु भएकोमा धन्यवाद", "कुनै समस्या छैन" हुन सक्छन् र "कसैले मलाई मन पराउँदैनन्" वा "मलाई थाहा थियो यो हुन सक्छ" जस्तो नराम्रो महसुस गराउने कुराहरू कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोस्। आफ्नो भावना व्यक्त गर्दा दोषी महसुस नगर्नुहोस्, यो प्रविधिले तपाईंलाई भविष्यको सम्बन्धलाई अझ राम्रोसँग बलियो बनाउन र थप विश्वास गर्न मद्दत गर्नेछ।
यदि तपाईलाई मनपर्ने व्यक्तिले समान भावनाहरू साझा गर्दछ भने, तपाइँ धेरै आभारी हुनुपर्दछ र त्यो क्षणलाई शैलीमा मनाउनुहोस् उत्साह र सन्तुष्टि को। अब तपाईलाई मन लाग्ने सबै कुरा साझा गर्ने समय हो सम्बन्धको सुरुवात र रमाईलो गर्नुहोस्। सबै कुरा बढ्न र बलियो बन्नको लागि, तपाईंले कुनै पनि कुरालाई जबरजस्ती र बिस्तारै बिना आफ्नो बाटो जान दिनुपर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » फिट » जोडी र सेक्स » तपाईलाई मन पर्ने कसैलाई कसरी भनौं
पुरुषहरूको लागि छोटो दाह्री शैलीहरू
कसरी गर्लफ्रेन्ड राख्ने